Khasaaraha nafeed ee ka dhashay diyaarad maanta ku gubatay garoonka Muqdisho oo sii kordhaya – Radio Daljir
Khasaaraha nafeed ee ka dhashay diyaarad maanta ku gubatay garoonka Muqdisho oo sii kordhaya
Agoosto 9, 2013 4:56 b 0
Muqdisho, Aug 9, 2013 – Khasaaraha ka dhashay diyaarad maanta ku dhacday garoonka Muqdisho ayaa sii kordhaya, taas oo hub iyo saanad kale u waday howgalka AMISOM ee jooga gudaha dalka.
Wararka haatan ka imanaya magaalada Muqdisho waxaa ay sheegayaan in afar ka mid ah shaqaalaha diyaarada ay dhinteen iyadoo uu dhaawac soo gaaray labba kale oo ka tirsan shaqaalaha, kuwaasi oo haatan lagu dabiibayo xaruun caafimaad oo ay AMISOM ku leedahay gudaha Garoonka.
Xaqiiqooyin is khilaafsan ayaa ka soo baxaya sababta gubashada diyaarada, oo wararka qaar ayaa sheegaya in dabka diyaarada uu bilowday markay soo degaysay, halka warar kalena ay sheegayaan in dabka diyaarada bilowday intii ay garoonka fadhiday, ilaa haddana war rasmi ah kama aysan soo saarin dowladda Soomaaliya.
Diyaarada ayaa waxay hub iyo saanad kale u siday AMISOM waxayna ka timid dalka Ethopia, lamase shaacin nooca hubka ay siday, shaqaalaha dab damiska ayaa ku mashquulsan sidii loo bad-baadin lahaa dad kale ee saaran diyaarada.
Xiriiro kala gedisan oo aan la samaynay saraakiil ka tirsan kuwa garoonka ayey noo suurta geli weyday in aan xog dheeraad ah arrintaan ka helno, balse wararka aan helayno waxay sheegayaan in aysan jirin khasaare ay diyaaradu u geysatay garoonka.
Howgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa arrintaasi wax laga xumaado ku tilmaamay iyagoo dowladda iyo shacabka Ethopia tacsi uga diray khasaaraha soo gaaray diyaarada ku gubatay magaalada Muqdisho, isla markaasna siday taageerada Meleteri.
Dowladda Soomaaliya oo deeq waxbarasho u qaybisay ardayda Soomaalida ah ee ku jira xeryaha Yeman
Ururka Al-shabaab oo Soomaalida ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan dagaalada lagu difaacayo Islaamka